ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောအမာခံဂိမ်းရှိပါတယ်သင်ကသူတို့ကိုပျော်မွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကသူတို့ကိုကစားနိုင်ပါတယ်ရှိရာဆိုဒ်များကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည်လိင်တူချစ်သူစိတ်ကူးယဉ်များသို့ရောက်နေပြီးအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောအချို့သောဂိမ်းများကိုလိုချင်ပါက၊ထို့နောက်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အသစ်၏စုဆောင်းမှုကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ဘာသာစကားတစ္္ခုကိုေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနသူမ်ားကဖန္တီးေသာေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏အဘိဓါန္ဗမာကိုမွန္ကန္ေစသည္။အဘိဓါန္ထဲမွအမွားတစ္စံုတစ္ရာကိုလွ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ျပင္ဆင္ေသာေၾကာင့္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏အခ်က္အလက္မ်ားကိုသင္ယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္သည္။ မျိုးဆက်သစ်ဆိုတာအရင်ကရှိခဲ့တဲ့အရာတွေထက်အများကြီးအဆင့်မြင့်ပါတယ်။ ဂိမ်းများသည်ပိုမိုအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဂိမ်းကစားခြင်းသည်ပို၍ရှုပ်ထွေးသည်။, အဆိုပါဂရပ်ဖစ်တိုးတက်ခဲ့ကြသည်နှင့်အရာခပ်သိမ်းအလုပ်လုပ်တယ်လမ်းကိုသင်တစ်ဦးအလွန်အမင်းဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုပူဇော်ဖို့အတူတကွကြွလာ။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,သင်ရှိစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဤဂိမ်းကစားနိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာ၊လက်ပ်တော့၊စမတ်ဖုန်းနှင့်တက်ဘလက်များတွင်သူတို့ကိုသင်ခံစားနိုင်သည်၊မည်သည့်အရာကိုမဆိုတပ်ဆင်ရန်မလိုဘဲ၊မလိုအပ်ဘဲအသုံးမပြုပါနှင့်။ သင်လိုအပ်သမျှသည်အသက် ၁၈ နှစ်ကျော်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်ဖြစ်သည်။ သင်ပြုပြီးတာနဲ့,သင်တို့သည်နောက်ကန့်သတ်နှင့်အတူဂိမ်းကစားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါတို့သည်လည်းအရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းကစားအများကြီးပိုပျော်စရာဖြစ်သည့်အပေါ်ဆိုက်နှင့်အတူလာကြ၏။ ဤဆိုဒ်အသစ်သည်သင်ပျော်စရာအချိန်အတွက်လိုအပ်သမျှကိရိယာများနှင့်သင်နှင့်အတူဂိမ်းနေစဉ်သင်၏ဝိသေသလက္ခဏာကိုကာကွယ်ပေးမည့်အကောင်းဆုံးလုံခြုံရေးစနစ်များဖြင့်သင့်ထံသို့လာသည်။ ဆိုက်နောက်ထပ်အလွန်ကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်ကသင်သည်အခြားကစားသမားများနှင့်အတူအပြန်အလှန်စေမည်သည့်အသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များကမ်းလှမ်းသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည်ဧကန်အမှန်သင်ဒီမှာတွေ့အရာအားလုံးကိုခစျြလိမျ့မညျ။ ယနေ့ညကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကစားလာကြ၏။
အခါကျနော်တို့ရှိသည်ဆိုက်၏စုဆောင်းမှုမှကြွလာသောအခါ,ကျနော်တို့ဝဘ်ပေါ်မှာရှိသမျှသောအမျိုးအစားများအနေဖြင့်ဂိမ်းများကိုဆောင်ကြဉ်းရန်စီမံခန့်ခွဲ။ သငျသညျလက်တွေ့ကျကျစွန့်စားနှင့်ဤလောကထဲကဖြစ်ကြောင်းနှင့်အတူလာအချို့ဂိမ်းနှင့်အတူလာလိမ့်မည်ဟုအမာခံဂိမ်းကစားပါလိမ့်မယ်။ လက်တွေ့ကျကျဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လိင်တူချစ်သူချိန်းတွေ့ခြင်းဂိမ်းများရှိသည်၊သင်သည်လိင်တူချစ်သူတစ်ဦး၏မှော်မှတစ်ဆင့်လိင်တူချစ်သူတစ်ဦး၏လိင်ကိုစူးစမ်းလေ့လာစေမည့်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများဖြစ်သည်။, ဒီဂိမ်းထဲမှာသင်ကအားလုံးဇာတ်ကောင်သင်တို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာမြေပုံပေါ်တွင်လိင်တူချစ်သူလူအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်,သင်ကောင်းစွာသူတို့ကိုသွေးဆောင်ဖြားယောင်းလျှင်မူကားအဘယ်မှာသူတို့သာသင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်,ကျနော်တို့စစ်မှန်တဲ့ဂိမ်းအတှေ့အကွုံကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ကြောင်းအချို့ဂိမ်းတွေနဲ့လာ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စွန့်စားမှုတစ်ခုဖန်တီးရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊သင်လုပ်နိုင်မည့်ဇာတ်ကောင်အသစ်များကိုသော့ဖွင့်နိုင်ရန်အတွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်မစ်ရှင်များကိုဖြည့်စွက်ခြင်း၊စွန့်စားခန်းတစ်ခုတွင်ကြက်စားခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်ကစားသာ.
ပြီးတော့ဒီစုဆောင်းမှုမှာလိင်ဂိမ်းတွေတောင်ရှိတယ်။ သငျသညျအသံထွက်သတ္တဝါအမျိုးမျိုးကိုခံစားပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဂိမ်းလိင်တူချစ်သူလိင်ဂိမ်းထက်ပိုရာပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်သားမွေးဇာတ်ကောင်အပေါ်နောက်ခံပုံပြင်များနှင့်အတူနှင့်ဇာတ်လမ်းလိုင်းများနှင့်အတူလာကြ၏။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်ပျော်မွေ့ခံရဖို့ဤမျှလောက်ပိုပြီးရှိပါတယ်သင်ရုံသင်တို့အဘို့အခြို့သောအားလပ်ချိန်မှာအချိန်နှင့်ရင်းနှီးမှုလိုအပ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှုအတွက်ပြီးသားဂိမ်း၏နာရီရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပေါ်မှာဆိုက်အသစ်ဂိမ်းထည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှဂိမ်းအခမဲ့ဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်ဆိုက်အပေါ်အချို့သောကြော်ငြာတွေရှိသည်ပေမယ့်,သူတို့ကသင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုမဟုတ်သလိုသင့်ရဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်မဟုတ်. ကျနော်တို့ကဒီစုဆောင်းမှုအတွက်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးလိင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်သင်အပေါ်တစ်ခုတည်းတစ်ပြားမှပေးဆောင်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့မသိမသာဆိုက်ပေါ်တွင်ထားရှိကြောင်းနဖူးစည်းစာတမ်းတွေ၏စုံတွဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆံအားလုံးလုပ်လိမ့်မည်ဟုငါသိ၏။ ဒါေၾကာင္႔ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလာေရာက္လည္ပတ္သူေတြေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိေနမွာေသခ်ာပါတယ္။, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပျဉ်ပြားမှတဆင့်ဤဧည့်သည်များနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးနှင့်ကျွန်တော်အကောင်အထည်ဖော်သောမှတ်ချက်ကဏ္ဍများ,အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်ပေးခြင်းမပါဘဲအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာအားလုံးအခမဲ့နှင့်လွတ်လပ်။